XOG: Maxaa ka jira in dowladda Soomaaliya ay saanad hub geysay degmada Hobyo? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Maxaa ka jira in dowladda Soomaaliya ay saanad hub geysay degmada...
XOG: Maxaa ka jira in dowladda Soomaaliya ay saanad hub geysay degmada Hobyo?
Hobyo (Halqaran.com) – Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay saanad hub ah dhinaca badda ku gaysay Degmada Hobyo ee Gobolka Mudug.
Wararka ayaa sheegaya in doomo nooca dheereeya oo hubka ka qaaday Dekeda Magaalada Muqdisho ay si nabdoon ku gaareen Xeebaha Degmada Hobyo.
Wararka ka imaanaya Degmada Hobyo ayaa sheegaya in hubkan ay leeyihiin Ciidanka Xoogga Dalka, gaar ahaan Qaybta 21aad oo hawlgalo ka dhan ah Ururka Al-Shabaab ka samayn doono Gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Wararka ayaa intaa ku daraya in qayb ka mid ah hubkan ay qaateen Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya, oo hawlo militari u joogga deegaano ka tirsan Gobolka Mudug.
Masuuliyiinta Maamulka Galmudug iyo Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ayaan ka hadlin saanadda hubka ee dowladdu gaysay Degmada Hobyo, waxaase la fahamsan yahay in dhawaan hawlgalo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab laga bilaabi doono deegaanada dhaca Xeebaha Galmudug.
Taliyaha qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General C/casiis C/laahi Qooje ayaa 5-tii bishan Deegaanka Cammaara ee Gobolka Mudug ka sheegay inay ku wajahan yihiin dhulka ay maleeshiyada Al-Shabaab kaga sugan yihiin Galmudug.
Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaale), ayaa bishii September Magaalada Dhuusamareeb ka sheegay in la qaadi doono hawlgalo Shabaabka looga sifeynayo Deegaanada Xeebaha Galmudug.
Degmada Hobyo ee Gobolka Mudug
General C/casiis C/laahi Qooje
la geeyay hobyo